Ukwethulwa kwe-Huwaei Mate 30 kuza ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ze-Google | Kusuka kuLinux
Ukwethulwa kweHuawei Mate 30 kufika ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza zeGoogle
AbakwaHuawei bethule ngokusemthethweni ngokusemthethweni ama-smartphones abo amasha we-Mate 30 izolo kodwa ukwethulwa kwenziwa ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza eziningi ezifakwe ngaphambilini kumafoni we-Android ngenxa yenkinga onayo manje ne-United States.
Ngalokhu, iMate 30 entsha neMate 30 Pro izingcingo zokuqala zeHuawei ukwethulwa ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ze-GoogleKepha zinikwe amandla yi-EMUI 10, esekwe ku-Android 10. Kodwa-ke, uHuawei uthe abasebenzisi bazokwazi ukufaka izinhlelo ze-Google ngokwabo uma bethanda.
Ukwethulwa kweMate 30 neMate 30 Pro Kungokwethulwa kokuqala okukhulu kwenkampani yaseChina selokhu yafakwa ohlwini lwabantu abamnyama e-United States, okukuvimbela ekwenzeni ibhizinisi nezinkampani zase-US nokumaketha imikhiqizo yazo.
Ngakho-ke, iHuawei ayivunyelwe ukusebenzisa inguqulo ye-Android enikezwe yiGoogle kanye nezinsizakalo ezihlinzeka ngokuzenzakalela. IHuawei Mate 30 neMate 30 Pro ngeke zisebenzise izinsiza zeGoogle nezinsiza (iGoogle Play Services), kodwa kunalokho enye inkampani eyibize nge- "Huawei Mobile Services (HMS)".
Lokhu okunye kwavumela iHuawei ukuthi ilayishe kabusha ezinye izinhlelo zokusebenza ezintsha, ngaphezu kokuvumela abasebenzisi ukuthi balande izinhlelo ezinjengeWhatsApp, Facebook noma i-Instagram esitolo sohlelo lokusebenza lweHuawei.
Ngokuqondene nezici ze-Mate 30 Pro, singathola Inomklamo ojwayelekile onenotch enkulu nesikrini esigobile ezinhlangothini njengamanye amafoni wakamuva.
Lolu uhlobo olusha lwesikrini olubizwa nge- «waterfall», Lesi yisikrini esigobile kakhulu kunalokho okuhlongozwayo njengamanje, i-curvature iya ngemuva kwecala ngomphumela omuhle oqinisiwe.
I-Mate 30 Pro itholakala ngemibala eyisithupha ephelele, kufaka phakathi izinketho ezimbili zesikhumba eziluhlaza okotshani ne-orange.
Eminye imibala ifaka phakathi isiliva, oluhlaza okotshani, onsomi, nomnyama. Imodeli ejwayelekile ochungechungeni, iMate 30, ifakwe ikhamera efanayo "e-super-sensing", kanye ne-16-megapixel wide-angle version kanye ne-8-megapixel telephoto lens yezithombe.
Ukuboniswa kuwo womabili amadivayisi kwehlukile kancane. I-Mate 30 Pro inesikrini esingu-6.53-intshi esivikela emaphethelweni edivayisi, kanti iMate 30 ejwayelekile inephaneli lendabuko elithe xaxa futhi inkudlwana (amasentimitha angu-6.62).
I-notch yefoni ibanzi futhi iqukethe izinzwa zokubonwa kobuso nge-infrared array kanye nekhamera ye-3D "yokuzwa ukujula", ngaphezu kwekhamera ye-selfie engu-32MB.
Kukhona ikhamera yesithathu "yokuthinta inzwa" kusikhala, ekuvumela ukuthi uskrole ukuthatha isithombe-skrini. I-Google nayo ilungiselela ukunikeza isici esinjalo sePixel 4, isebenzisa i-radar esikhundleni sekhamera. Imodi ye-Mate 30 Pro "AI Auto Rotate" isebenzisa ikhamera yangaphambili ukulandela ubuso bakho, iqinisekise ukuthi isikrini sijikeleza kahle ngokuhambisana nobuso bakho, hhayi umhlaba.
Ngemuva, ifoni inamakhamera amane.
ikhamera ye-40 megapixel (MP) 'super sensing' enenzwa enkulu kunokujwayelekile kwefoni. Lokhu kukuvumela ukuthi uthwebule ukukhanya okuningi futhi ngenxa yalokho udubule ngokukhanya okuphansi;
ikhamera ye-8MP ene-3x zoom optical, okusho ukuthi umsebenzisi angasondela entweni afuna ukuyithwebula ngaphandle kokuyekethisa isinqumo.
Ikhamera yefilimu engama-40 MP, enikezelwe kuvidiyo. U-Huawei uthe inenzwa ebanzi yesilinganiso kunezinye. Inzwa iphinde inikeze ukuzwela okungcono kwevidiyo ephansi nokuhamba kancane, ukuletha kufreyimu efinyelela ku-7,680 ngomzuzwana;
ikhamera ye-3D "yokuzwa ukujula", enikezela ngemininingwane engasetshenziswa ukufaka umphumela wokufiphaza ongokoqobo kuzizinda zezithombe namavidiyo.
Ngenkathi ibhethri libuye lihluka kusuka kufoni kuya kwefoni. I-Mate 30 Pro inebhethri elikhudlwana le-4.500 mAh uma iqhathaniswa ne-4.200 mAh ye-Mate 30. Zombili izingcingo zingashaja ngokushesha kufika ku-40 W ngentambo noma i-27 W kwimodi engenantambo.
I-Mate 30 ne-Mate 30 Pro iyatholakala ngezinguqulo ze-4G ne-5G ze-chip ye-Kirin. I-chip ingeyokuqala kaHuawei ukufaka imodemu ye-5G eyakhelwe ngaphakathi. U-Huawei uchaze ukuthi kwimodemu ye-5G, ifoni ifaka ama-antenna angama-21 esewonke.
IHuawei Mate 30 Izotholakala nge-8GB ye-RAM ne-128GB yesitoreji.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ukwethulwa kweHuawei Mate 30 kufika ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza zeGoogle
I-Linux: nezinye izinsiza ezithokozisayo
I-Linux kernel 5.3 isivele ikhishiwe, yazi okusha